NOW 29,400.00 Ks
Enprani White Cell Softener 160ml
Whitening skin softener that makes clean skin background with plenty of moisture. Whitening function skin softener that makesabright and clear skin tone through deep transmission of whitening ingredient and the moisturizing ingredient of moist activator complex™. Makes clean and smooth skin background by removing waste and dead cells from the skin. youthcell™ will care the3layers of skin texture (internal, external, moist), and thus making dense and smooth skin texture.
Enprani White Cell Foam 100ml
လီလီပန်းသုံးမျိုးနှင့် ရေဓာတ်အားဖြည့် အီတလီရူကိုလာရွတ်တို့ အပြင် ပဲနှင့်ဂျပန် Sumac အပင်တို့မှ အစွမ်းကြောင့် သာမာန်ဖြူဝင်းခြင်းထက် အဆပေါင်း (150) အထိ ကြည်လင်ဝင်းပစေနိုင်ကာ သဘောင်္သီး၏ ပရိုတင်းဓာတ်က ချွေးပေါက်များအတွင်း အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး ပေါ့ပါးအေးမြစေသော Foam Cleanser type ဖြစ်ခြင်း။
အသားအရေကို ချောမွေ့ စေခြင်း ၊ မျက်နှာပြင်ကို ဖြူဝင်းတောက်ပစေခြင်း ၊ Moisture အစိုဓာတ်ကို ရရှိစေခြင်း ၊ ချွေးပေါက်တွေကို ကျဉ်းစေခြင်း ၊ အသားအရေကိုတင်းတင်းရင်းရင်းရှိစေခြင်းစတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို တစ်မျိုးတည်းသုံးရုံနဲ့ရရှိစေနိုင်ခြင်း။
Enprani White Cell Foam 170ml